Khayre oo mataanaysiiyey Doxa iyo Dayniile | allsanaag
Khayre oo mataanaysiiyey Doxa iyo Dayniile
Khayre oo mataanaysiiyey Doxa iyo Dayniile, welina diidan in Dubai loo ganacsi tago
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta Magaalada Doxa ee dalka Qadar heshiis kula saxiixday Dhigiisa Magaalada Doxa Jamal Madar.
Heshiiskan ayaa ah mid mataaneynaya labada magaalo ee Muqdisho iyo Dooxa, kaasoo noqonayo markii ugu horeeysay taariikhda labada Magaalo.
Heshiiskaan mataanaynta ah ayaa waxa uu ka kooban yahay 10 qodob oo ay labada magaalo iska kaashan doonaan sida dib u dhiska magaalada, isdhaafsiga aqoonta iyo xirfadaha, horumarinta adeegyada bulshada ee assaasiga ah sida Caafimaadka, nadaafadda iyo dhiraynta magaalooyinka, mas’uuliyiinta iyo hoowlwadeenada labada magaalo oo booqashooyin ku kala bixin doono Magaalooyinka Muqdisho iyo Dooxa si looga wada shaqeeyo barnaamijyo mid ah oo lagu horumarinaayo labada magaalo.
Waxaa sidoo kale ka mid ah hishiiskaan in labada magaalo iska kaashadaan horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga iyo sidoo kale in labada magaalo ay ka wada faa’iideestaan barnaamijyada iskaashiga iyo horumarinta oo ay qabtaan labadooda doowladooda ee Soomaaliya iyo Qadar.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay ku sugnaa Magaalada Doxa isagoo ka qaybgalayay Madasha Doxa, waxaana uu ka mid yahay wafdi uu hogaaminayay Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre.Heshiiska1 of 3
← Guulwade gacmuhuu dhiig ku leeyahay Sayidka oo eedaymo kulul u jeediyey Villa Wardhiigleey →